आधुनिक कम्पनीको लक्जरी कार ब्रान्ड चीनमा सुरु भएको छ, शंघाई संवाददाता अपमानजनक हवाई वाहनों को अद्भुत प्रदर्शन - Pandaily
Categories: Industry Lucia Si अप्रील 7, 2021 अप्रील 7, 2021 मा पोस्ट
2 अप्रिलमा, विश्वव्यापी लक्जरी कार ब्रान्ड एक शानदार यूएवी शंघाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रूज टर्मिनल मा “संस्थापक संस्थापक” भनिन्छ, चिनियाँ बजारमा यसको आधिकारिक प्रवेशको चिन्ह लगाउँदै।
प्रदर्शनीको दौरान, उत्पत्ति आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उत्पादनहरू, लक्जरी कारहरू समेत G80, र पहिलो एसयूभी gV80 सिर्जनात्मक जी। यसको उत्पत्ति दुई-लाइन वास्तुकला परिभाषा द्वारा, दुई मोडेल एक सुरुचिपूर्ण खेल प्रदर्शन हो।
उत्पत्ति मूलतः आधुनिक कारको लागि एक उच्च-सिजन कार मोडेल थियो, केवल केहि वर्ष लागिसकेको थियो। नोभेम्बर 2015 देखि, उत्पत्ति एक आधुनिक लक्जरी उप-ब्रान्ड सञ्चालनको रूपमा, उच्च प्रदर्शन, डिजाइन, सुरक्षा र नवाचारको साथ एक विशेषताको रूपमा।
दक्षिण कोरियामा मुख्यालय, उत्पत्ति संयुक्त राज्य र क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, रूस र मध्य पूर्वमा धेरै बिक्री छ। ब्रान्ड संसारको वरिपरि कार प्रशंसा गर्ने उच्च गुणस्तर उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ, र यसको ग्राहकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन।
19औं शताब्दीमा, उपभोक्ता रिपोर्टहरू र जे.डी. सहित औद्योगिक टिप्पणीकारहरूको अत्यधिक मूल्याङ्कन गरिएको थियो। गति र उत्तरी अमेरिकी वार्षिक कार सहित पुरस्कार प्राप्त गरेको छ।
वर्तमानमा, G70, G80, G90, GV70, GV80 सहित अधिक व्यापक उत्पादन सरणी सहित। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, G80 र GV80 मोडेलले चीनी बजार परिचय गर्नेछ, यद्यपि यो चीनको धनी र उप-बजार आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त हुने सम्भावना छैन।
अर्को हेर्नुहोस्:81 सेट: चीनमा विजय हासिल गर्न के चाहिन्छ
किन चीनले अर्को युद्धको मैदानमा रोज्नुभयो? सबैभन्दा पहिला, नयाँ क्राउन द्वारा दक्षिण कोरिया र अमेरिकी बजार को आय को दुई प्रमुख स्रोत हटना छ। यसको विपरीत, प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण उपायहरूको लागि धन्यवाद, चीनको लक्जरी कार बजार अहिले 1 9। 9% को तीव्र विकासमा वृद्धि भएको छ, 2020 मा बिक्री 2.79लाख पुग्यो।
तर जेनेसिस लक्जरी कार उद्योगमा धेरै प्रतिस्पर्धाहरू छन्, जसमा मर्सिडीज बेंज, अडी र बीएमडब्ल्यू, उनीहरूको वार्षिक बिक्री 700,000 भन्दा बढी पुग्यो। चिनियाँ बजारमा कोरियाली कारहरू बढ्दै गयो, तर घरेलू प्रतिस्पर्धाको लागि अनिश्चितता ल्याउन पनि मद्दत गर्दछ। 2020 मा, चीनमा हुंडई र किआ दुई कोरियाली ब्रान्डहरू 41 मिलियन बेचेका थिए, 2019 बाट 32% तल।
“चीनमा ब्रान्डको परिचय हाम्रो ब्रान्ड इतिहासको महत्त्वपूर्ण महत्त्व हो, सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नयाँ अध्याय, जुन प्रारम्भिक चरणमा ब्रान्ड निर्माणमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ, र हामी हाम्रो चिनियाँ दर्शकहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने योजनालाई खुलासा गर्न जारी राख्नेछौं।” मार्कस हेनर, संस्थापक कार चीन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
चिनियाँ उपभोक्ताओंका लागि नयाँ ब्रान्डको रूपमा, उत्पत्तिको एक विश्वसनीय साझेदार र नयाँ व्यापारिक मोडेलको लागि अनलाइन च्यानलहरू प्रत्यक्ष बिक्रीको आधारमा आधारित हुनेछ, यसलाई बिस्तारै चीनको बजार साझेदारी विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ।
ब्रान्ड नयाँ लक्जरी सामानको चीनी उपभोक्ता व्याख्याको लागि प्रतिबद्ध छ। यस बिन्दुलाई जोड दिनको लागि, यसले आफ्नो ब्रान्ड घोषणा-“तपाईंको शताब्दी” जारी गर्यो। यो एक बलियो व्यक्तिगत शैली, बोल्ड avant-garde सोच, सौंदर्यशास्त्र र अद्वितीय प्रशंसा को डिजाइन को लागि एक प्रतीक हो।
उत्पत्ति वन मूल्य निर्धारण मोडेल को कार्यान्वयन को लागी कार्यान्वयन गर्न को लागी कि सबै बिक्री चैनलों को एक एकीकृत मूल्य सुनिश्चित गर्न को लागी। 2021 शंघाई फैशन वीकसँग चाँडै काम गर्नेछ, शंघाईमा “उत्पत्ति हाउस” खोलियो, यसको उत्पादनको उपभोक्ता अनुभवको लागि, यसको ब्रान्ड संस्कृति फैलियो।